Namsan, Namsan Park - Seoul
Adiresy: Korea Atsimo, Seoul, Jung-gu, Yejang-dong
Contact phone: + 82-2-3783-5900
Fotoana misokatra: 24 ora
Ny valan-tserasera amin'ny Tendrombohitra Namsan ao Seoul dia malaza amin'ny mponina sy ny mpitsidika ao an-drenivohitr'i Korea Atsimo . Misy toerana tena mahaliana ao amin'ny valan-javaboahary, anisan'izany ny fampidirana ny tilikambo fahitalavitra Seoul "N" sy ny zaridaina botany iray miaraka amin'ireo zavamaniry hafakely.
Ny Park Namsan ao Seoul dia iray amin'ireo toerana manan-tantara ao an-drenivohitra. Nandritra ny dinastin'i Joseon (faran'ny faha-14 ka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20), renivohitry ny fanjakana dia Khanyan (anarana ankehitriny dia Seoul). Mba hiarovana azy dia tapa-kevitra ny hanangana ireo tendrombohitra efatra lehibe ao an-tanàna - Pukhansana, Invansan, Naxan ary Namsan - rindrina mandresy. Araka izany, eo an-tampon'ny Namsan (ny anarany dia midika hoe "Tendrombohitra Tatsimo"), dia nisy tilikambo famantarana 5 nampiasaina hampita vaovao avy any amin'ny governemanta ao amin'ny governemanta foibe.
Inona no mahaliana momba ny valan-tserasera amin'ny Tendrombohitra Namsan?
Manintona ireo mpitsidika amin'ny sehatra tsara tarehy sy panoramasiana ao Seoul ny faritra. Tena mangina sy mamy tokoa izy io, afaka mahatsapa ny firindrana amin'ny natiora, miaina ny rivotra madio ary mamerina ny lafy tsara. Afaka miala sasatra ao amin'ny Namsan Park ianao mandritra ny tontolo andro tsy misy famerana. Ary satria malalaka be ny faritaniny, na dia amin'ny faran'ny herinandro aza, dia maro ny mpizahatany tsy voamarika.
Ao an-tampon'ny Tendrombohitra Namsan no tilikambon'ny fahitalavitra malaza Seoul, ary io angamba no tena mampiavaka an'ireny toerana ireny.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Namsan Park:
lay lay fihaonana Phalgakjeong;
Havoanan'i Ponhvade miaraka amin'ny afo famantarana, izay niaro ny renivohitra;
Ny tanànan'ny foko koreanina ao Namsangol , toerana izay hahatsapanao ny toe-tsain'ny kolontsaina nasionalin'ny mponina ao an-toerana ary hahafantatra ny toetran'ny fiainany;
Ny tranomboky "Namsan", izay manolotra fanontana, manomboka amin'ny taona 1922, ary misy aquarium lehibe miaraka amin'ireo mponina ao amin'ny ranomasina lalina;
toeram-pialamboly am-pilaminana, trano fisakafoanana revolisionera ao amin'ny tilikambo TV Seoul, trano fivarotana kafe sy fahatsiarovana.
Làlana maro an-dalambe no mankany amin'ny tampon'ny Namsan, anisan'izany ny Namdemunu, Hwenhyong-dong, Changchong Park, Itaewonu, Huam-dong, sns.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny tendrombohitra sy ny Namsan Park?
Ny Park Namsan dia miorina eo afovoan'ny renivohitr'i Korea atsimo - tanànan'i Seoul , any amin'ny tendrombohitra an-jatony manana haavo 265 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Azonao atao ny manatratra ny valan-tseranana amin'ny fiara, metro (ny fiantsonana akaiky indrindra antsoina hoe Myeongdong, mila miala 3) na amin'ny fitateram - bahoaka - bisy fotsy miala lavitra avy ao Chungmuro ​​na Dongguk metro station. Ao amin'ny fahanginana avo indrindra amin'ny valan-javaboary sy ny Tendrombohitra Namsan - Seoul Tower "N" - afaka mandeha amin'ny fiara fitaterana ihany koa ianao.
Ciliary tsikitsiky - fitsaboana
Closet miaraka amin'ny tratran'ny hosotra
Ny gymnastique sinoa ho an'ny fahavoazana
Fampiharana avy amin'ny serealy
Karôpôry misy tongolo gasy sy mayôna
Fanatsarana ny trano
Sarimihetsika momba ny fahaverezan'ny lanja
Fanadiovana ny bakteria avo lenta
Ilay mpihira Christina Aguilera dia te-hanaraka ny satroboninahitra miaraka amin'ny "tsiboboka"
Ahoana no hisafidianana rindrina ho an'ny efitra fandraisam-bahiny?
Jennifer Lawrence dia tsy afaka manafina ny fiainany amin'i Darren Aronofsky
Voangory fotsy - ahoana no hiadiana?
Marika ho an'ny vehivavy bevohoka
Ahoana ny fomba hanamboarana valindrihana eo amin'ny balcony?